China ọgwụ mezuwo Gelatin ụlọ ọrụ na-emepụta | Yasin
Gelatin egosiputa otutu oru ya na ngwa ndi oru ogwu na ogwu. A na-eji ya eme ihe mkpuchi nke capsules siri ike na nke dị nro, mbadamba, granulation, suppositories dochie anya ọgwụ, nri nri / ahụike, syrups na na. Ọ bụ nke nwere ike ịgbagha ma na-eje ozi dị ka mkpuchi mkpuchi eke maka ọgwụ. N'ihi mmụba ahụike na-eto eto na ọchịchọ na-arịwanye elu maka ngwaahịa ahụike, enwere ihe dị mkpa maka nchekwa maka gelatin na ihe siri ike maka usoro mmepụta. Nke ahụ bụ ihe anyị na-edebe ma na-emeziwanye.
Jelii Ike Oge ntoju 150-260Bom
Viscosity (6.67% 60 Celsius） Nkechi 2.5
Nghọta mm ≥500
Ntinye 450nm % .50
Mkpokọta Nje bacteria CFU / g 1000
E.Coli MPN / g Na-adịghị mma
Gelatin na-etinye usoro ọgwụ ya na gelatin niile eji eme ihe maka gelatin dị nro, ma ha bụ maka ọgwụ, nri, ihe ịchọ mma ma ọ bụ agba agba. Anyị na-atụle ebe ahụ ka ngwa ahụ na-achọ ma jiri nlezianya họrọ gelatin iji nye ikike na-agbanwe agbanwe.
Latinlọ ọrụ Gelatin R & D nọ na-amụ ngwa gelatin na capsule dị nro ruo ọtụtụ afọ ma nweta ahụmịhe dị ịrịba ama na ngwọta nsogbu nsogbu, karịsịa na igbochi mkparịta ụka na nke ọ bụla n'ime ihe ndị na-arụ ọrụ, gbochie mmetụta nke ịka nká, isi ike na nkwụsị.
Na capsules siri ike, gelatin na-enye faịlụ dị ike ma na-agbanwe agbanwe maka ụdị mpempe akwụkwọ. E mepụtawo gelatin a iji hụ usoro ndị gbara ọkpụrụkpụ.
E wezụga luminous anya, adị-ndụ nke anyị na ngwaahịa bụ ndị fọdụrụ n'ezinụlọ na China; ọ dịghị mkpa itinye ihe nchekwa ọ bụla site n'aka onye ahịa anyị ma ọ bụrụ na ejiri Yasin Gelatin n'okpuru gburugburu ebe obibi GMP.
Yasin Gelatin na-agbaso ụkpụrụ dị mma na ike yana ọkachasị ọgwụ chọrọ dịka ndị nke USP, EP ma ọ bụ JP kọwara.
Na mbadamba, Gelatin bu ihe eji eme ihe, ihe nkpuchi na ihe nkpuchi nke gha achota ihe ndi choro choro banyere ojiji nke ihe eji eme ya. Ọ bụrụ na-enye mbadamba agụụ mmekọahụ anya na obi ụtọ ọnụ na-adị.